Tombokavatsa - Wikipedia
Ny tombokavatsa na tombo-kavatsa na havatsa na tatoazy dia fanaovana sokitra sarisary na soratra na marika amin' ny hoditry ny tarehy na ny vatan-tena nany sandry na amin' ny faritra hafa amin' ny tena, izay matetika miloko maitso manga sady tsy azo vonoina, nefa mety ho amin' ny lokoa isan-karazany sady azo vonoina na tsia, izay efa fanaon' ny olombelona hatramin' ny vanim-potoana neôlitika.
Tany am-boalohany dia matetika no natao tamin' ny ranomainty indiana na ranomainty vita amin' ny arina na jabora ny tombokavatsa. Amin' izao fotoana izao dia miha ampiasaina bebe kokoa ny ranomainty misy fandoko sentetika. Misy loko isan-karazany amin' ny ranomainty.
Ny teknikan' ny tombokavatsa dia ny fampidirana ny ranomainty eo ambanin' ny hoditra amin' ny alalan' ny fanjaitra na zava-maranitra hafa. Ny ranomainty dia apetraka ao anatin' ny hoditra eo anelanelan' ny atihoditra sy ny ivelankoditra. Ny halalin' ny tsindrona dia miovaova eo anelanelan' ny 1 sy 4 mm arakaraka ny karazana hoditra sy ny faritra amin' ny vatana, ka ny faritra matevina indrindra dia ny ao amin' ny lamosina sy ny kiho ary ny lohalika.
Ny tombokavatsa dia efa fanao an' arivony taona eran' izao tontolo izao, izay natao sy mbola atao noho ny antony ara-panoharana, ara-pivavahana na ara-javakanto. Any amin' ny sivilizasiona maromaro dia heverina ho fombafomba fidirana amin' ny sata vaovao ny tombokavatsa noho ny fanaintainana iaretana mandritra ny fanaovana azy.
Ny tombokavatsa koa dia fomba atao hanamorana ny fanisana natao hamantarana ny andevo, ny voafonja na ny biby fiompy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Tombokavatsa&oldid=1043991"
Voaova farany tamin'ny 12 Febroary 2022 amin'ny 14:19 ity pejy ity.